Professional Diploma in Psychology • Toe Tet
Today Promotion = 290,000 Ks
Psychology ဘာသာရပ်ဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ စိတ်ရဲ့လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လေ့လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သိရှိထားတဲ့ သုတပညာတွေကို ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေး စတဲ့နယ်ပယ်စုံမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိပဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အားနည်းနေတယ်လို့ ထင်သလား?
ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လမ်းပျောက်နေသလား?
တစ်နေ့တာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အခက်တွေ့နေသလား?
ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲချင်သလား?
လူသားတွေရဲ့ Behavior ကိုလေ့လာဖို့အတွက် Psychology ဘာသာရပ်ကို လေ့လာပြီး ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလိုက်ပါ။
Its all in the mind ဆိုပြီး George Harrison ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အရာအားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်မှာ အခြေခံတာကြောင့် Psychology ဆိုတာဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Psychology ဘာသာရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး လူသားတွေရဲ့ စိတ်၊ ခန္တာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အပြုအမူ တွေကို အချိုးကျကျနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ Industrial and Organizational Psychology မှာဆို လူသား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ လိုက်လျှောညီထွေမှုတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပေးလို့ လုပ်ငန်း ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်ပြီး သာယာကျေနပ်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်
– စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမှုဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရပ်
– ခံစားမှုဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရပ်
– စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရပ်
– ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရပ်
– စက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရပ်များကို
လေ့လာနိုင်ဖို့ Oxford College မှ ချီးမြှင့်တဲ့ Psychology Foundation Course တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dr. Thet Lwin ရဲ့ Professional Diploma in Psychology ကိုလေ့လာပါ။
Enrollment Fee – $250 (Diploma ရယူလိုပါက City of Oxford College တွင်စာရင်းသွင်းပြီး Assignment6စောင်ရေးရမည်။) Assignment များကို email ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
City of Oxford College သည် နှစ်ပေါင်း ၅၉ နှစ်ရှိ UK ရှိ Oxford မြို့အခြေစိုက် College တစ်ခုဖြစ်သည်။ Y.E.C Learning Center ဧ။် learning partner အနေဖြင့် 2016 မှာစတင်ခဲ့သည်။ Y.E.C Learning Center သည် City of Oxford College မှ Diploma in Business & Management (DBM) Program ကို တရားဝင်ပို့ချခွင့်ရထားသော တစ်ခုတည်းသော center ဖြစ်ပါသည်။
City of Oxford College အနေဖြင့်ရရှိထားသော ဆုများမှာ -Association of Colleges Beacon Awards for effective use of technology, practical approach to teaching and learning and for staff development -Apprenticeships for England Bronze Award
-TES FE Awards – Outstanding use of technology (highly commended)
1. ( Unit 1 ) Introduction to Psychology
2. Psychology ကိုသုံးပြီးလေ့လာလို့ရတဲ့အရာများ
4 Study of Behavior & Mental Processes
5 Psychologist တွေအတွက် အလုပ်သုံးမျိုး
7 Biological Psychology
9 Education & School Psychology
11 Industrial & Organizational Psychology
12 Engineering Psychology
15 Environmental Psychology
18 History of Psychology
19 Methods of Psychology (1)
20 Naturalistic of the Vision Method & Survey Method
21 Case Study Method
22 Experimental & Correlation Method
1. ( Unit2) Motivation Introduction
3. Innate Theory
4. Clark L Hull’s Drive Reduction Theory
5. Maslow’s Theory
6. Categories of Motivation
1. ( Unit3) Emotion Introduction
2. Four Integral Components of Emotion
4. Subjective Feeling and Physiological Process
5. Behavioral Reaction
6. Calssification of Emotion
8. Sympathetic & Parasympathetic System
9. Emotional Expression
10. James-Lange Theory
11. Cannon-Bard Theory
12. The Schachter-Singer two-factor Theory
1. ( Unit4)Personality Introduction
2. What is Personality
4. Idiographic Approach
5. Nomothetic Approach
6. ID of Personality Structure
7. Ego of Personality Structure
8. Super Ego of Personality Structure
9. Behavioral Approach
1. ( Unit5) Developmental Psychology Introduction
4. Healthy Development
5. Faulty Development
6. Over Protective Environment
7. Unrealistic Demands
1. ( Unit6) Industrial and Organizational Psychology Definition
2. Three Premises of Industrial and Organizational Psychology
5. Engineering Psychology
6. Vacation and Career Counselling Psychology
8. History of Industrial and Organizational Psychology Part (1)
9. History of Industrial and Organizational Psychology Part (2)
10. History of Personal Psychology
11. History of Engineering Psychology
12. Types of Criterias
13. Production Criteria
14. Salary Criteria
15. Promotion Criteria
16. Turnover, Absence and Accident of Hard Criteria
17. Soft Criterias
လူအများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေရသော HR Professional များလေ့လာသင်ယူသင့်သောဘာသာရပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ Course Module များအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဝင်ငွေအသင့်တင့်ရှိသောသူများတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်တန်း‌ကြေးသုံးရစ်ခွဲသွင်းနိုင်သောအစီအစဉ်များစီစဉ်ပေးနိုင်ပါကအရမ်း‌ကောင်းပါမည်။
THET OO KO
3 Psychology asascience
19 Methods of Psychology
4. Clark L Hull's Drive Reduction Theory
5. Maslow's Theory